Fikarohana anaran'ny domain | Martech Zone
Ahoana ny fividianana anarana domain
Alatsinainy Martsa 29, 2021 Alakamisy, Aprily 1, 2021 Douglas Karr
Raha mitady anarana domain ho an'ny marika manokana ianao, ny orinasanao, ny vokatrao, na ny serivisinao, Namecheap dia manolotra fikarohana be dia be hikarohana iray:
Mitadiava sehatra manomboka amin'ny $ 0.88
Torohevitra momba ny fisafidianana anarana nomena
Ireto ny hevitro manokana momba ny fisafidianana anarana domain:
Ny fohy kokoa no tsara kokoa - arakaraka ny maha fohy ny fonenanao no tsy hay hadinoina ary mora kokoa ny manoratra azy ka andramo ny mandeha amina faritra fohy. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny faritra ambanin'ny litera 6 dia efa voatokana efa ela. Raha tsy mahita anarana tokana sy fohy ianao dia manandrana mitazona farafahakeliny ny isan'ny vanin-teny sy ny teny… mba hanadinoako hatrany ny tsy ho hadino. Ohatra, Highbridge dia nita ny sehatra avo lenta rehetra, saingy orinasan-kevitra izahay ka afaka nividy roa Highbridgeconsulting ary highbridgeconsultants… anaran-tsehatra lava miaraka amin'ny vaninteny maro, saingy tsy hay hadinoina satria teny roa monja.
Ekena ny TLD samihafa - Mitohy miova ny fihetsika manoloana ireo mpampiasa amin'ny Internet sy ny fampiasan'izy ireo ny anaran'ny sehatra. Rehefa nisafidy domain .Zone avo lenta (TLD) aho dia nisy olona nanoro hevitra ahy hitandrina… mba tsy hatoky ny maro ny TLD ary hihevitra fa karazana tranonkala manimba aho. Nofidiko io satria tiako ho martech ho sehatra, fa ny TLD hafa rehetra dia efa nalaina avokoa. Mandritra ny fotoana maharitra, heveriko fa hetsika tsara izany ary efa mihabe ny fifamoivoizako ka mendrika ny ahiana. Ataovy ao an-tsaina fotsiny fa rehefa misy olona manoratra domain tsy misy TLD, dia misy laharana fanandramana… raha manoratra martech aho ary miditra enter, ny .com no andrana voalohany.
Aza sorohina - Aza sorohina rehefa mividy anarana domain… tsy hoe ratsy izy ireo fa satria manadino azy ireo ny olona. Hisoratra ao amin'ny fonenanao tsy misy azy ireo izy ireo ary mety hahatratra ireo olona diso.
Keywords - misy fitambarana samihafa mety misy dikany amin'ny orinasanao:
Location - Raha ho fananana sy hampiasa eo an-toerana hatrany ny orinasanao, ny fampiasana ny anaran'ny tanànanao amin'ny anarana dia mety ho fomba iray lehibe hanavahana ny fonenanao amin'ireo mpifaninana aminao.
Brand - Tombony azo ampiasaina matetika foana ny marika satria matetika no tsipelina tsy manam-paharoa ary tsy dia efa nalaina.
loha - Ny lohahevitra dia fomba iray hafa mampiavaka ny tenanao, na dia marika marimaritra iraisana aza. Manana anarana domaine topical kely aho ho an'ny tetik'asa ho avy.
fiteny - Raha teny anglisy no raisina dia manandrama mampiasa fiteny hafa. Ny fampiasana teny frantsay na espaniola amin'ny anaranao dia afaka manampy pizazz vitsivitsy amin'ny marika amin'ny orinasanao.
Ahoana raha raisina ny fonenanao?
Ny fividianana sy fivarotana anaran'ny sehatra dia orinasa ahazoam-bola nefa mieritreritra aho fa tsy fampiasam-bola maharitra izany. Rehefa mihamaro ny TLD tonga eo, ny fotoana hividianana sehatra fohy amin'ny TLD vaovao dia mihamitombo hatrany. Raha ny marina rehetra dia tsy manome lanja ny sasany amin'ireo fonenako toa ny nataoko taloha aho ary navelako handeha amin'ny denaria amin'izao fotoana izao izy ireo.
Na izany aza, raha orinasa matotra amin'ny fividianana sehatra fohy efa noraisina ianao, ny ankamaroany dia takiana amin'ny tolotra sy fivarotana. Ny torohevitro dia ny faharetana fotsiny fa aza adala loatra amin'ny tolotra omenao. Nifampiraharaha tamin'ny fividianana sehatra marobe ho an'ny orinasa lehibe izay tsy te ho fantatra aho ary nahazo izany ho an'ny ampahany kely amin'ny vola angatahin'ilay mpivarotra. Manamarina ihany koa aho raha misy ny fantsom-piarahamonina misy azy ireo koa. Raha azonao atao ny mahazo ny Twitter, Instagram, Facebook, ary anaram-bosotra hafa hifanaraka amin'ny fonenanao, izany no fomba tsara hitazonana marika tsy miova!
Fampahalalana: Ity widget ity dia mampiasa ny ID misy ahy Namecheap.
Swarmify: Antony efatra tsy tokony hampiasa sary an-tsokosoko ao amin'ny tranokalan'ny orinasanao
Fironana marketing: ny fiakaran'ny ambasadaoro sy ny fotoanan'ny mpamorona